Nrọ Banyere Agwọ - Ihe Nduzi Zuru Banyere Agwọ, Ihe Odide & Nkọwa - Nkọwa Isi Nrọ
Okwu Sitere N'ike Mmụọ Nsọ
Tarot Kaadị Pụtara
Nrọ Banyere Agwọ - Nduzi zuru ezu
Nkọwa Nrọ & Nkọwa nke Nrọ Na-enweghị Nchịkwa
Ezitere site na
Site n'oge gara aga, ndi mmadu na ndi mmuo edowo ọnụ n’uwa a. Mgbe ha na-agba egwu ọnụ na nrọ , ihe nnọchianya ahụ pụrụ ịbụ nke mmekọahụ, nke uche, na-emenye ọbụna mkpụrụ obi dị ike ụjọ.
Nrọ maka agwọ, bụ otu n’ime nrọ ndị a na-ahụkarị. Mmetụta uche na nke mmetụta uche nwere ike ibi na nghọta nke mmadụ ruo ọtụtụ afọ. N'ihi nke a, ndị njikọ miri emi nke mmụọ mmadụ na agwọ bụ isiokwu a na-akwụsi ike na-atụle, nkewa, na arụmụka na nkọwa nrọ na nyocha.
Tupu anyị egwube ihe nrọ pụtara banyere agwọ, ọ dị mkpa ịmata nke ahụ dabere na ya Gallup’s Fears Poll Nghoputa - 56% nke ndị America kpọtụrụ egwu agwọ . Yabụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na nrọ nrọ ejikọtara ya na mmetụta nke ụjọ, ụjọ, na nrụgide.
N'eziokwu, nke a anaghị agba nke ọma maka ọtụtụ nrọ maka agwọ. Ma, karịa ihe bụ isi nke ịbụ onye na-asọ oyi, nke na-asọ oyi, nke na-ajụ ọtụtụ (ka emechara, ọ dịghị ihe na-enweghị ụkwụ ga-enwe ike ịmegharị ngwa ngwa) nrọ agwọ nwere ike ijide oke akara ngosi dị mma maka gị! O siri ike ikwere, anyị maara.
kedu ebe anyi no n’usoro mbara igwe
Gịnị Ka Ọ Pụtara Mgbe Yourọ Nrọ Banyere Agwọ
Yabụ, gịnị kpatara nrọ nke agwọ ji eme ka nrọ dị otú ahụ pụta ?
Dị ka anyị kwuru na mbụ, ike agwọ na ihe ọ na-eweta na mmụọ mmadụ bụ primordial. Si akụkọ ifo ụwa chi agwọ ndị na-echebe ala na ihe onwunwe nke ihe a kpọrọ mmadụ agwọ agwọ ahụ anyị na kpakpando ndị na-ele anyị anya site n'eluigwe, agwo were otutu uzo mmadu .
Ebumnuche iji weghachite njikọta akụkọ ihe mere eme n'etiti anụ na-akpụ akpụ na ụmụ mmadụ bụ iji chụpụ ebe a - mgbe anyị na-arọ nrọ nke agwọ, anyị na-eji nrọ anyị mgbe ochie anyị na-echeta banyere mkpokọta mkpokọta.
Site na anyi cellular Memory, mgbe anyi n’aria banyere agwo, anyi ihe ndapụta uche na-akpọkọta ọtụtụ narị afọ nke onyonyo agwọ . Nke a bụ incredibly ike stof! Ọ bụghị ihe ijuanya na nrọ agwọ na-eme ka anyị pụọ!
Akara ala? Nrọ nke agwọ na-agwa anyị okwu na isi anyị. N'ihi ya, Nrọ agwọ na-apụtakarị naanị mgbe anyị nwere ihe dị oke njọ ịpị n'uche, ahụ, na mmụọ.
Otú ọ dị, cheta na ọ bụghị nrọ nile nke nrọ na-arọ nrọ. Nọgidenụ na-agụ iji chọpụta otú nrọ banyere agwọ nwere ike isi bụrụ ihe omimi n'ezie. Eeh. N'ezie.
Nsụgharị Nkọwa Agwọ & Nkọwa Site Ihe Nrọ
Tupu iji Daily Horoscope Astros Nkọwa Okwu ma ọ bụ isi nrọ agwọ ahụ n’isiokwu a, were nkeji ole na ole gụọ Mụta ịkọwa ihe nrọ pụtara . O ga enyere gi aka idi ka ike nyochaa nrọ gị .
Ihe kachasị mkpa bụ nrọ nrọ bụ iji tụlee mmetụta ị na-enwe mgbe ị tetara nro. You tụrụ ụjọ, nwee olile anya, ọchị, iwe, agụụ mmekọahụ, wdg. Ọ na-adị gị ka nrọ ahụ ọ bụ amụma mmụọ?
Anya ndị ị na-elele ihe oyiyi agwọ na-enyere aka ịkpụzi ihe akara agwọ ahụ nwere ike ịpụta na nkọwa nrọ gị. You nwere phobia ma ọ bụ ịhụnanya nke agwọ? Nọpụ iche n'agwọ
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-atụ ụjọ agwọ, kweta mmetụta a ma jụọ onwe gị ma enwere ihe ị na-atụ ụjọ n'oge ụra gị. There nwere ihe ị ga-achọ izere nke chọrọ ka i lebara anya ozugbo?
Nke ozo, ọ bụrụ na ị nwere ịhụnanya pụrụ iche maka agwọ , onwere ihe odi n’udi na eteta gi nke i nwere obi uto banyere ya? Enwere ihe ị nwere ike 'kee onwe gị' ma bụrụ onye nwere mmasị na ya?
Maka nyocha ọzọ, chee echiche banyere ihe agwọ ahụ na-eme ma ọ bụ na ọ naghị eme mgbe ị zutere ya na akụkọ nrọ gị. Agwọ ahụ, omume ya, na ọdịdị ala nke agwọ ahụ na-emekọrịta ihe nwere ike ịtụgharị ya iji nye ihe ọ pụtara.
Tụlee ihe niile ndị a nwere ike ịrọ nrọ na otu ha si dị iche:
Nrọ Banyere Agwọ na Mmiri
Mmiri na-egosiputa mmiri nke ogbaaghara, agwo nke no na miri puru igosi ihe okike. Mgbe ụfọdụ, a na-egosi agwọ ahụ ka ọ na-apụta site na akwa akwa. Mmiri na-egosipụta mmetụta uche na agwọ nke na-egosipụta amamihe, ihe oyiyi a nwere ike ịkọwa njikwa amamihe nke mmetụta uche mmadụ ma ọ bụ amamihe sitere na ahụmịhe mmetụta uche. Mmiri na-abịa na-anọchi anya ihe subconscious; a agwọ na mmiri a onodu na-atụ aro amaba n'ime subconscious maka oge maka nzube nke nyocha onwe onye, ​​ma na mgbe e mesịrị na-apụta ọzọ ma gbanwere na amamihe karịa na mbụ.
Nrọ Banyere Agwọ Ahịhịa
Ọ bụ ezie na ị na-agagharị na ahịhịa bụ ebe obibi nke agwọ ahụ, enwere echiche dị njọ na agwọ ahụ na-agagharị na ụwa. Mkpakọrịta a nwere ike si na agwọ agwọ ọjọọ, nke ụfọdụ dịka cottonmouth nwere ike igosi ike. Ya mere, akara ngosi a na-anọchite anya ihe na-adịghị ọcha, obi ọjọọ, nke a na-apụghị ịtụkwasị obi, ihe ize ndụ nwere ike, aghụghọ, na zoro ezo, mwakpo ma ọ bụ mwakpo na-atụghị anya ya 'n'okpuru eriri.' N'ụzọ dị iche, ndị hụrụ agwọ n'anya nwere ike ịhụ agwọ ahụ na ahịhịa naanị ka ha kwụsị ma nwee ekele maka ọ dị mma, na-enweghị ntụpọ, njide onwe onye na ike dị egwu. Ya mere, nrọ nke agwọ ahụ na ahịhịa maka onye na-ahụ agwọ ahụ nwere ike ịkọwapụta àgwà ndị achọrọ iji tinye n'ime ndụ kwa ụbọchị, ma ọ bụ ime dị ka agwọ na-enweghị ntụpọ na-enweghị ntụpọ na njide onwe onye na ọnọdụ enyere.
Nrọ Banyere Agwọ na Ihe Mmekọahụ
Sigmund Freud weere onyinyo nrọ nke agwọ dị ka ihe ịrịba ama nke mmegide nwoke na nwanyị n'ihi agwọ nke agwọ dị ka àgwà ma kwenyere na mmegide ahụ metụtara erughị ala na akụkụ nwoke nwoke. Otú ọ dị, n'ọdịbendị ụfọdụ, agwọ bụ akara nke ọmụmụ. Ndị Hopi India nwere agba egwu kwa afọ iji sọpụrụ njikọ nke nwa agbọghọ Agwọ na Agwọ Ntorobịa, nke ekwenyere na ọ ga-eme ka ọmụmụ nke okike dị ọhụrụ.
Nrọ Banyere Agwọ N'ime Ihe Ndina Gị
Dika ihe nrọ mbu rutara, odigh ihe obula g’eme ka obi di gi nfe kari iteta na agwo nke ejikoro nke oma ma sie ike dika o na amuta ekpomoku ahu gi! Dreamrọ nrọ n'akwa ahụ bụ ịmata adịghị ike gị, inwe mmetụta dị ka a ga-asị na ị nọ n'ihe ize ndụ, ịtụ ụjọ ịmegharị ka a ghara ịta gị, na ịlaghachi azụ, mee ngwa ngwa, ma si na mpaghara agwọ ahụ gbapụ na mbọ chebe onwe gị. Tughariara n'ime oge iteta, o nwere ike bụrụ ihe onye nrọ ahụ na-eme maọbụ na ọ ga-eme nke na-akpali mmetụta nke ihe egwu, ngwangwa, ma ọ bụ mkpa ọ dị ime ihe ngwa ngwa n'ọnọdụ ahụ tupu ime ya abụghịzi nhọrọ. N'aka nke ọzọ, a na-ejikọ agwọ na akara nke nwoke n'ihi ọdịdị nke ahụ ha wee bụrụ ihe nnọchianya nke mmekọahụ. N’ebe agwọ nọ n’elu akwa, mmetuta ị hụrụ mgbe ị hụrụ ha nwere ike igosipụta mmetụta ị na-enwe banyere mmekọrịta nwoke na nwanyị, mmekọrịta chiri anya, na onye na-agafere onwe gị. Ọzọkwa, agwọ dị n’elu akwa nwere ike igosipụta mmetụta obi ọjọọ megide onye mmekọ ịhụnanya.
Nrọ Banyere Agwọ Agwọ
Ọ bụrụ n ’nrọ ịchọrọ ịdaba nnukwu olulu nke agwọ, nrọ gị nwere ike igosipụta mmetụta nke enweghị nguzozi, enweghị nguzozi na ụkwụ gị, enweghị ntụkwasị obi ma ọ bụ enweghị nchekwa na ndụ gị. Dreamdị ụdị agwọ a na-ahụkarị maka ndị na-achọ ịrị elu ọkwa ụlọ ọrụ yana onye ọ bụla bụ ma ọ bụ chọrọ ịnọ n'ọchịchị nke ndu.
Nrọ Maka Ndi Agwọ Na-achụ
Nke a bụ nrọ na-adọrọ mmasị n'ihi na ọ na-achịkọta akara ịchụso na akara nke agwọ ahụ. Ọchịchọ ịchụso abụghị ihe a na-adịghị ahụkebe, na oge ụfọdụ onye / ịbụ / anụ ọhịa / ihe okike na-achụ gị bụ ihe nnọchianya nke otu ma ọ bụ karịa ndị ị na-eme ugbu a n'oge ụra gị. Tụlee okwu ahụ bụ 'agwọ' mgbe e ji kọwaa àgwà mmadụ: Ọ na-anọchi anya onye dị umengwụ, onye aghụghọ, ma ọ bụ ọbụna onye pụrụ ịbụ onye ị pụrụ iwere dị ka onye ọjọọ. Nrọ a nwere ike ịkpọ gị ka ị leruo ndị gị na ha na-emekọ anya ma chegharịa onye ị tụkwasịrị obi. N'otu oge ahụ, nrọ a nwekwara ike ịbụ ihe ịrịba ama na ị na-agba ọsọ site na ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ na-egbu egbu nke naanị gị nwere ike idozi ozugbo ị chere ya ihu. Beingchụpụ nwere ike ime ka ị chee na enweghị nchedo na enweghị ngwangwa: Mmetụta ndị a nwere ike ịkọwa ọnọdụ ndị na-eme ka ị nwee nrụgide, enweghị ike, ụjọ, ma ọ bụ nchegbu.
Nrọ maka agwọ tara gị nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara, na, n'eziokwu, ihe onyonyo a bụ ihe a na-ahụkarị dịka nrọ. Nke mbu, ihe ama ama putara bu ihe egwu puru iche site na ihe ojoo n’eto gi. Uzo ozo putara bu na ebe obu na agwo n’akwukwo Jenesis na echiche nke onwunwa, agwo ata nwere ike buru ihe iriba ama nke ufodu onwunwa nke igagh adi ka izere ma obu gbapu. Mgbe agwọ tara gị, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ na-eyi egwu ma ọ bụ oge mgbe agwọ ahụ lebara gị anya; ya mere, nrọ a nwere ike igosi na ịkwesịrị ịmatakwu ma payaa ntị na ihe ndị ị na-eleghara anya na ndụ gị, ma ọ bụghị na ị nwere ihe ize ndụ ịbụ onye 'na-atụghị anya ya' na ọnọdụ nwere nsogbu.
Nrọ Banyere Egwu Ọjọọ Na-ata Gị
Enwere obere obi abụọ banyere ike mbibi nke nsị na-abanye n'ime ahụ. Ha nwere ike igosipụta na ọnọdụ ọjọọ nwere ike imetụta gị ma ọ bụ na ị nwere ike daa ngwụrọ ma ọ bụ oyi na ọnọdụ ka ị na-eguzogide mgbanwe dị mkpa nke a ga-etinyerịrị iji nwere onwe gị pụọ na mgbochi onwe gị. N’ikpeazụ, mgbe agwọ tara gị, nsị ndị ahụ na-abanye n’ahụ ma mepụta nnukwu mgbanwe. Yabụ, ịta agwọ na-abụkarị akara nke mgbanwe dị egwu, mbido, ma ọ bụ mgbanwe nke anụ ahụ, nke mmụọ ma ọ bụ abụọ. Otu ihe dị mkpa: Mgbe agwọ tara gị na nrọ, closeaa ntị nke ọma ebe ebe ọ na-ata ata. Ebe agwọ ahụ bụkwa akara nke ịgwọ ọrịa, onyonyo ahụ nwere ike igosi mkpa ọ dị itinye akụkụ ahụ ahụ ụfọdụ anya ma ọ bụ na ị nwere ike ịmalite okwu ahụike metụtara akụkụ ahụ ahụ.
Nrọ maka Agwọ na Ọkụ
Elò nke agwọ na-ejikọ anụ ahụ na ihe ọkụkụ, na ihe ọ bụla ihe ahụ pụtara gụnyere agụụ, ihe okike, mmekọrịta nwoke na nwanyị, agụụ ihe ọjọọ, ịdị ọcha, mana mbibi, mmanye, oke ochicho, mkpali, na ihe ọkụkụ nke ndụ na ihe okike.
Nrọ Banyere Agwọ Ọhịa na Tame
Nrọ nke ịbịakwute agwọ n'èzí na-egosi ihe egwu na omume na-enweghị atụ. N'ezie, Iv zutere agwọ na-ekwu okwu n'ogige Iden, n'ihi ya, agwọ ọjọọ abụghị nanị ihe na-egosi ọnwụnwa, kama ọ bụ okwu na-egbu mmadụ, asịrị, ụgha, na ozi nduhie. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ n 'nrọ ị ga-enwe maka agwọ ị na-asọpụrụ n'anya, ọ nwere ike ịpụta na ị ga-amụba amamihe gị ma ọ bụ nweta nghọta ime mmụọ.
Nrọ Banyere Agwọ na Onyinyo Onwe Gị
Theresa Cheung, onye edemede nke 'The Element Encyclopedia of 20,000 Dreams', na-ede otú agwọ si arụ ọrụ dị ka ihe nnọchianya maka 'Onyinyo ahụ' anyị. Ebumnuche nke onyinyo sitere na Jungian psychology, ebe Carl Gustav Jung na-egosi na akụkụ dị oke mma nke mmadụ nke onye ahụ jụrụ ma ọ bụ jụ ịnakwere ma ọ bụrụ akụkụ nke amaghị ama. Jung na-ekwusi ike na, ọ bụ ezie na ọ bụghị kpamkpam na-adịghị mma, onyinyo ahụ na-adịwanye njọ ma na-agba ọchịchịrị ka mmadụ na-ezere ya. Mgbe agwọ banyere gị nrọ oge akụkọ, o nwere ike ịbụ The Onyinye akụkụ nke onwe gị na-afụ site na amaghị ihe ọ bụla na-achọ ude. Ikekwe oge eruola ka ị nabata ntakịrị nke ndò gị, nke a na-ekwu na-agbazinye maka mbọ okike na uto nke onwe.
Nkọwa Nta Agwọ na Okpukpe na Akụkọ ifo
Mgbe ị na-elele agwọ anya site n'okpukpe nke okpukpe ma ọ bụ akụkọ ifo, enwere ọtụtụ akara ngosi ị nwere ike ịchọpụta - ọkachasị gbasara chi nwanyị! Agwọ ekerewo òkè pụtara ìhè n’ọtụtụ okpukpe n’ụwa nile. Na-enyocha amaokwu ọdịnala na nke ọdịnala ndị a, ị nwere ike ịchọpụta na akara okpukpe na akụkọ ifo na-enyere aka n'ịmepụta nghọta bara ụba banyere nrọ ị na-ahụ.
Na Omenala ndị Babịlọn, Mesopotamians na Semite , achoputara agwo dika ihe ekere eke nwere ike idi ndu rue mgbe ebighebi. Mmịnye ọbara na ịwụpụsị agwọ ahụ nọ n'azụ echiche a, agwọ ahụ na-adịkarị ume ọhụrụ ma na-eto eto mgbe ọ bụla ọ wụsịrị. N'ihi ya, agwọ ahụ na-abịa n'ụzọ doro anya ịlọ ụwa, mmeghari ohuru, na ịlọ ụwa. Ihe oké osimiri nwanyị Tiamat na Mesopotamia bụ chi e jikọtara ya na ọgba aghara na ihe oyiyi na-egosi ya dị ka agwọ, si otú a na-ejikọta agwọ ahụ na ọgba aghara, mmiri nke oge mbụ, na ihe okike.
Echiche agwo bu ihe eji ama ogwu bụ a ọtụtụ narị afọ ochie echiche, na Ndị Sumer buru ụzọ fee Ningishzida, chi nke ifo . Echiche ndị dị n'okpuru ala dị mfe nke ukwuu ikenye agwọ ndị na-akpụgharị afọ ha n'elu ụwa. Ihe nnọchianya Ningishzida nwere agwọ abụọ ejikọtara ọnụ (ihe oyiyi na-egosi nkwekọ nke ike abụọ ma ọ bụ ume), na onyonyo a dị ogologo oge tupu Greek God Hermes, bụ onye na-eje ozi dị ka onye ndu maka ndị nwụrụ anwụ ka ọ na-eduga ha n'ime ụwa. ọkọnọ na a caduceus (mkpanaka nke nwere agwọ abụọ ejikọtara ọnụ), ma ọ bụ ngosipụta nke mkpanaka ya na otu agwọ ejiri ya kee ya chi Asclepius n'ime otu pantheon ahụ, onye bụ a chi ogwu na ogwu . Ihe agwọ na akara akara ahụike taa sitere na akụkọ ifo a .
Ejikọtara akara nke chi jikọtara ya na akara agwọ! N’Ijipt oge ochie, ọtụtụ n’ime chi nwanyị ndị ahụ na-eyi okpueze etinyere agwọ ubí n’ihu, ihe odide ha nwekwara ihe oyiyi nke agwọ ahụ. Ihe chi nwanyị Wadjet , nke na-egosipụta nne nwanyị na-akpụ agwọ, bụ chi nwanyị na-elekọta chi nke Ijipt. Ọ bụ ebe a ka a ghọtara agwọ ahụ dị ka akara ngosi nke anwụghị anwụ na, na agwọ ubí, karịsịa, na-egosipụta ntụpọ na azụ ya nke yiri anya, ghọrọ akara maka amamihe na ọhụụ.
Na Rom oge ochie, ọgụgụ isi loci , nke mere ka ọ bụrụ mmụọ pụrụ iche nke na-echekwa otu ebe ahọpụtara, e gosipụtara dị ka agwọ: Ya mere, ọ bụ ebe a ka agwọ ahụ na-arụ ọrụ nke onye na-echebe ụwa ọzọ.
Na etiti Italy, enwere Angitia, chi nwanyị Marisian na-agwọ ọrịa onye aha ya sitere n'okwu 'agwo.' O jikọtara ya na agwọ agwọ, agwọ, na ndị amoosu.
Akụkọ ifo Greek nwere ọtụtụ ihe oyiyi agwọ, karịa nke ndị ahụ Hamis , gụnyere agwọ nke Hercules meriri dị ka nwatakịrị, na chi nwanyị nke Minoan Snake nke na-ejide agwọ n'aka ọ bụla: Ihe akpụrụ akpụ ya bụ nke na-eje ozi dị ka ihe ịrịba ama nke ike na amamihe.
N'ezie, n'akụkọ ọdịbendị ndị Greek, a na-ejikọkwa onyonyo agwọ na anụ ahụ dị egwu, mana ọ nweghị nke ọma gorgon Medusa onye, ​​n’agbanyeghi otua na-egosi na nzuzo, bụ n’ezie ihe ịrịba ama nke amamihe nwanyị.
Nwanyị Mary: A na - egosiputa Virgin Mary mgbe ufodu ya n’ukwu agwo: Ngosiputa a bu ihe n’egosi na idi ocha ya na otu o siri adabaghi ​​na onwunwa nke ekwensu n’oge ndu ya. N'ịkwụ n'isi agwọ ahụ, ọ na-egosi na Meri na-echifịa isi agwọ ahụ wee si otú a na-egbu anụ na-akpụ akpụ. Nke ahụ bụ eziokwu, ọ bụrụ na ị hụ Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke ka ọ na-atụkwasị ụkwụ n'ụkwụ na nrọ gị, ọ nwere ike ịpụta na ị na-egbochi ọnwụnwa ma ọ bụ na ị kwesịrị ịgbalịsi ike ime ya na ndụ gị.
Nrọ Banyere Agwọ - Echiche Shamanic
Dịka totem, agwọ na-eweta ọgwụ ọkụ wee kụziere gị otu esi eme ka ị dị ọcha ma gbanwee ndụ gị. Shafọdụ ndị dibịa afa na-ahụ agwọ ahụ dịka akara nke eriri na-ejikọ mkpụrụ obi na ahụ wee mee ka ọ dịgide. Nrọ nke totem a bu ihe ngosi iji attentionaa nti na nkuzi nke agwo na ndu gi. Na saịtị nwanne m, WhatIsMySpiritAnimal.com , mụta ihe niile banyere agwọ dị ka mmụọ, totem, na anụmanụ dị ike .
Nke a bụ chi okike na Aboriginal Australia: Ekwuru na agwọ dị n'okpuru ụwa, o bilie kee ugwu ugwu. Ọ bụrụ nro n ’nrọ agwakọta mara mma, ọ nwere ike ịdị mkpa na ị ga-ejikọ ụwa. A maara agwọ a, dịka onye na-agwọ ọrịa, sitekwa n'ememe, ga-enyefe mmadụ ikike ndị ahụ. Ebe ọ dị otú ahụ, kwusi ma tụlee ma ọ bụrụ na mmụọ gị amata ihe dị gị mkpa iji gwọọ onwe gị ma ọ bụ na ịchọrọ ịgwọ onye ọzọ.
Okwu Kundalini pụtara, 'a tụkọtara ọnụ,' na nke a, ọ na-ezo aka na shakti ike nke na-agbago site na isi ọkpụkpụ azụ ebe mgbọrọgwụ chakra dị iji kpalite oghere nke wiil ndị siri ike. Wiil ndị ahụ na-agba ọsọ na spain site na mgbọrọgwụ chakra gị na isi gị ma karịa; a na-ewere ike a na-ekpo ekpo dị ka 'ụra na-ehi ụra' nke, mgbe edemede, ga-eduga na edemede ime mmụọ. Hụ ụra, agwọ na-atụ nrọ na nrọ gị nwere ike ịbụ nrụtụ aka na ike a na ihe ngosi maka mgbanwe ime mmụọ n'ọdịnihu.
Nrọ nke Agwọ Dị ka Agwọ
Agwọ bụ akara nke ike aghụghọ. E jikọtara ya na onye dị aghụghọ, onye aghụghọ, na onye aghụghọ. Ya mere, o nwere ike buru ihe nnọchianya nye onye ọ bụla yiri ụdị aghụghọ, ma ọ bụ ekwensu na akụkọ ifo ndị Kraịst ma ọ bụ chi ọzọ ndị ọzọ sitere na akụkọ ifo ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọpụta na agwọ ahụ na-apụta na nrọ gị nwere àgwà yiri nke aghụghọ, ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ebe mmadụ na-eme ọgbaghara ma ọ bụ na-akpa agwa ọjọọ. Oge ụfọdụ n'ọtụtụ akụkọ ifo, omume ndị aghụghọ na-emesị bụrụ ihe na-eweta uru ka ukwuu. Mgbe agwọ pụtara, tụlee onye bụ aghụghọ na ndụ gị yana ebumnobi onye a nwere ike ịbụ maka omume ha?
Nrọ Banyere Ijikwa Agwọ
Ijikwa Agwọ bụ emume okpukpe nke onye na-eme ihe ahụ kwenyere na ọ bụrụ na ha ejigide okwukwe siri ike na Chineke, na Ọ ga-echedo ha ma chebe ha ka ha ghara ịta agwọ ọ bụla agwọ ha họọrọ. Ndi oru ahu kwenyere na oburu na aru aduru ha ma obu ha drinkua na nsi ogwu, na Chineke gha achoputa na odighi ihe ojoo biara ha. Ọ bụrụ n ’nrọ ndị na - ejikwa agwọ agwọ, ụbụrụ gị nwere ike ibu amụma banyere ule nke okwukwe gị n’oge ị na - eteta.
Ouroboros bụ ihe ngosi nke agwọ mmiri nke na-elo ọdụ ya yana na ime nke a, a na-ekwu na ọ ga-emetụta oke osimiri ụwa. A matala akara ngosi a dika ihe osise nke World Snake na akara aka nke ndu, onwu, na omumu. Ọ bụrụ n ’ịhụ akara ngosi agwọ a na nrọ gị, lelee ka ị hụ ihe ị na-awụpụ n’oge ụra gị na ihe a na-amụ ọzọ ma ọ bụ na-emegharị.
Agwọ na Astrology, Zodiac Signs, & Birth Totems
Mgbe ụfọdụ, mgbe anyị na-arọ nrọ maka agwọ, anyị nwere ike na-arọ nrọ nke otu onye ma ọ bụrụ na agwọ bụ akara zodiac ha ma ọ bụ ọmụmụ ha. Na Western Astrology nke Akara kpakpando Scorpio bụ akpị, agwọ, na ugo nọchiri anya ya. Iji mụtakwuo banyere agwọ ndị na-agụ kpakpando, gụọ banyere Afọ nke Agwọ & China Zodiac agwọ Ọzọ Agwọ Dị Ka Nwa Nwa Ala America .
Agwọ nrọ Ihe atụ
Agwọ, site na akụkọ ifo na okpukperechi, abiala iji gosipụta ọtụtụ ihe ka oge na-aga. Isi agwọ ihe atụ pụtara:
Ndụ, ọnwụ, na nlọghachi
Agwọ na Ọgwụ
Ike chi / Nwanyi Chukwu
Okike / Omumu nke Cosmos
Laghachi / ịlọ ụwa
Agwọ dị ka aghụghọ
Mmeghari ohuru na Ntughari
Nrọ nke Agwọ
Ee, nrọ banyere agwọ nwere ike imenye ụjọ. Ma ha nwekwara ike ịbụ nke ukwuu na mmụọ . N’agbanyeghi otu osiri puo i puo mgbe gi riri nrọ nke agwo - were oge iji nyochaa ihe n’eme n’obi gi na isi gi. Echefula ozi uche nke ahụ nwere ike bụrụ onyinye e nyere gị site na nduzi mmụọ, nna nna gị, na ndị mmụọ ozi.
Na ihe ndị dị n'okpuru, kọọrọ gị echiche na ajụjụ gbasara nrọ agwọ!
The Daily Horoscope Astros obodo dịịrị gị maka na ọ ga-ahụ gị n'anya isonye!
Nke a ntinye e gwa ke Nkọwa Nrọ & Nkọwa nke Nrọ Na-enweghị Nchịkwa . Detuo na permalink . Mụta ịkọwa ihe nrọ pụtara Horoscope nke ọnwa 2016
Chakra Sacral (Syadisthana Chakra): alinggwọ ọrịa, ntụgharị uche, ihe ọ pụtara, Nkume & Kristal
Sagittarius na Capricorn Ndakọrịta: Enyi, &hụnanya na Mmekọahụ
Isi ihe ise na ihe ọ pụtara
Ihe Anwansi Anwansi Anwansi
Osisi ọmụmụ nke Jenụwarị: Nzube nke ihe pụtara na akara
taurus nwoke na taurus nwanyi n'akwa
nwoke cancer nwere ịhụnanya n'ebe nwanyị scorpio nọ
olee iwu nke ihe nke igwe kwesiri iru ka eweputara ya dika uwa?